डि’भोर्सपछि एक्लै जीवन हाँकिरहेका १० महिला कलाकार ! -
डि’भोर्सपछि एक्लै जीवन हाँकिरहेका १० महिला कलाकार !
डि’भोर्स गरेर दोस्रो विवाह गर्ने कलाकारहरुमा संचिता लुइटेल, पूजा चन्द, सिम्पल खनाल, प्रियकां कार्की , झरना बज्रचार्यलगायत छन् ।
९) अन्जु पन्त
अन्जु पन्त व्यस्त र सफल गायिकाको रुपमा चिनिन्छिन् । पाश्र्व गायनमा उनलाई औधी रुचाइएको छ । अन्जु पन्त र गायक मनोज राज विवाह गरेको १० वर्षपछि छुट्टिए । अन्जुले श्रीमानसंग असहजता भएको कारण छुट्टिएको बताउँदै आएकी छिन् । अहिले अन्जु छोरीसंग बस्दै आएकी छिन् ।
१०) चुल्ठिम डोल्मा
← कोरोनाले मृ’त्यु भएको युवक भनेर भाइरल ‘फेक फोटो’को कथा ! पुरा पढ्नुहोस्…
किन माेटी भन्दा पातली केटी बढी मन पराउँछन् तँ पुरुषहरु ? हेर्नुहोस… →